दास मानसिकता छोड्न नसक्नु सरकारको कमजोरी
भारतलाई नेपाल र नेपाली जनताले बनाएको संविधान मन परेको छैन। त्यही कारण मधेसी मोर्चामा आबद्ध रहेको राजपालाई उचालेर संविधान संशोधन गर्न भारत अग्रसर रह्यो। संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदले अस्वीकृत गरेर असफल पारेको मसी सुक्न नपाउँदै पाँचदिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन पछि पारित हुने विश्वास भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिलाए। भारतको भूमिमा पाइला टेक्ने बित्तिकै भारतीय सरकारको पाउमोल्ने प्रम देउवाको अभिव्यक्ति दास मानसिकताको दृष्टान्त हो।
संसदले असफल पारेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेरि पारित गर्ने आँट देउवाले कहाँबाट प्राप्त गरे? पहिले ९१ प्रतिशतले पारित गरेको संविधान भारतलाई संशोधन गर्न किन आवश्यक भयो? नेपालमा बनेको संविधानबारे भारतले पेट दुखाउनुपर्ने विषय होइन। भारतीय प्रम मोदीसामु प्रम देउवाले व्यक्त गरेको भनाइले नेपाल सरकार भारतसामु आत्मसमर्पण गरेको देखाउँछ। यसले नेपाल सरकार भारतीय शासक वर्गको पछि लागेको या भारत सरकारको उठवसमा लागेको थाहा हुन्छ।
नेपालको संविधानबारे भारतले चासो राख्नुपर्ने होइन, नेपालको संविधानबारे भारतले टिप्पणी गर्नु र भारतकै चाहनाअनुसार राजपामात्र होइन नेका र आमूल परिवर्तन गर्न 'जनयुद्ध' छेड्ने माओवादी केन्द्रसमेत पछि लग्नु विडम्बनाको विषय हो। सरकारकै पहल र नेतृत्वमा ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल हुनु भनेको नैतिक पराजय हो, नैतिकताको आधारमा देउवा सरकारले त राजीनामा दिनुपर्थ्यो, राजीनामा दिएर उदाहरणीय काम गर्नुपर्थ्यो। आफ्नो नैतिक पराजयलाई स्वीकार नगरी उल्टै विदेशी भूमिमा पछि दुईतिहाइ मतले पारित गर्छु भनेर भारतीय प्रमसमक्ष भन्नु हार्ने गोरूको छेर्ने दाउमात्र हो।
अरू देशका शासक समक्ष के बोल्नुपर्छ के बोल्नुहुँदैन भन्ने थाहा नपाउनु या थाहा पाएर पनि बुझ पचाउनु देशको मर्यादा उल्लङ्घन गर्नु हो। यो देशकै बेइज्जत हो। देशको गौरवमा ठेस पुर्‍याउने काम प्रम देउवाले गरे। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका देउवाले देशभित्र एकथोक भन्नु र अर्को देशभित्र अरूथोक गर्नु नेपाल र नेपाली जनतामाथि गरिएको अविश्वास हो, विश्वासघात हो। के भारतीय भूमिमा पाइला टेक्नेबित्तिकै भारतसामु झुक्नुपर्छ? भारतीय सरकारलाई खुसी पार्नुपर्छ? भारतलाई खुसी नपारिकन नेपालको शासन चल्दैन? यसरी नेपाल सरकार भारतनिर्भर हुँदै गएको हुँदा भारतले नेपाललाई हेपेको हो, आफ्नो उठवसमा राखेको हो। नेपाल सरकारको कमजोरीमाथि भारतले फाइदा उठाउँदै आएको छ। भारतले चाहेको यही हो। दास मानसिकता छोड्न नसक्नु नेपाल सरकारको कमजोरी हो। यस्तो कमजोरी सधैं दोहोर्‍याउनु हुँदैन। नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम गर्नुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, देशभक्तिको भावना जगाउनुपर्छ ।